कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् चैत्र २ गते शनिबारको राशिफल « Dhankuta Khabar
कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् चैत्र २ गते शनिबारको राशिफल
श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल चैत्र २ गते शनिबार इश्वी सन् २०१९ मार्च १६ तारीख फाल्गुन शुक्लपक्ष दशमी तिथी १९ः०९ बजे सम्म पश्चात एकादशी तिथी पुनर्वश नक्षत्र शोभन योग तैतिल करण चन्द्रमा मिथुन राशिमा १६ः४१ बजे सम्म पश्चात कर्कट राशिमा आनन्दादि योगमा छत्र योग सुर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु –ज्यो.पं. सरोज घिमिरे/धनकुटा खबर ।
सामान्य कार्यको निम्ती धेरै समय ब्यतित हुनाले मानसीक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्छ । नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ ।
बृष राशि -इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो
नयाँ लगानिको क्षेत्रमा समय राम्रो छैन सजग रहनु होला । सामान्य चोटपटकको सिकार भईन सक्छ सजग रहनु होला । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ ।
मिथुन राशि -का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह
साझेदारी कार्यको क्षेत्रमा अघि नबढेको नै राम्रो हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमता मा कमि आउनेछ । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ ।
कर्कट राशि -हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो
मित्र तथा दाजुभाई बिचको सम्बन्धमा खटपट रहन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । शारीरिक आलस्यताले सताउ सक्नेछ । मान्यजनको स्वास्थमा आएको खराबिका कारण सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेको छ । परोपकारका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ ।
सिंह राशि -मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, ट
आयमूलक कार्यमा जुट्ने माध्यम फेला पर्नेछ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । प्रतिस्पर्दा मुलक कार्यमा बिषेश सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ ।
कन्या राशि -टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो
सभा सम्मेलनमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । नेतृत्व गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनमा चन्चलताले बास गरेतापनि ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो लाभ लिन सकिनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नाले दिगो आर्थिक लाभको बाटो बन्न सक्नेछ ।
तुला राशि -र,रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते
साथी भाईहरुको खराब संगतका कारण सामान्य अपजस आई पर्नेछ । साझेदारी कामका क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । सामान्य खर्च भएता पनि मनमा चिन्ता भने रहने छैन । यात्राका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला ।
बृश्चिक राशि -तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु
मनोबिलासिताका सामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ सञ्चित रकम खर्च हुने योग रहेको छ । बाणिको कारण दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ ।
धनु राशि -ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे
प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । जिवनसाथीको साथ सहयोग द्वारा आम्दानि क्षेत्रमा मार्गदर्शन मिल्नेछ । परोपकार तथा ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । कार्य क्षेत्रको लापरबाहिले सामान्य झन्झट आईपर्ला ।
मकर राशि -भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि
परोपकारको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । कुराकाट्ने ब्यक्तिको कमि नरहला । बोल्दा सजग रहनु होला बोलिको कारण नजिकका मित्रजन रुष्ट रहन सक्छन । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला ।
कुम्भ राशि -गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द
सामान्य चुनौति पस्चात आम्दानि राम्रो रहनेछ । बौधिक ब्यतित्व हरुको साथ प्राप्त हुनेछ । बिद्या प्राप्ति योग रहेको छ । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ । सामान्य यात्रा हुन सक्छ । चाढो क्रोधको सिकार भईनेछ सजग रहनु होला ।
मीन राशि -दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि
सभा सम्मेलनमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । आय मुलक कार्यको थालनि हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमता मा बृद्धि हुने योग रहेको छ ।